I-Ethereum Iyini nokuthi ungathenga kanjani ama-Ethers? Konke mayelana ne-blockchain | Izindaba zamagajethi
I-Ethereum Iyini nokuthi ungathenga kanjani ama-Ethers?
UMiguel Gaton | | Criptomonedas, Izaziso, Ubuchwepheshe
I-Etherum akuyona enye indlela elula yeBitcoin uqobo, kepha kunalokho iyipulatifomu esebenzisa ubuchwepheshe be-blockchain (futhi esetshenziswa yiBitcoin) hhayi kuphela ukunikela ngenye indlela yokukhokha kufana neBitcoin, Ether, kepha kuyisiteji sokuthuthukisa isoftware esisiza ekwakheni amasistimu e-cryptocurrency abelana ngamabhulokhi amaningi, aziwa kangcono nge-blockchain, lapho amarekhodi afakiwe engakwazi ukuhlelwa noma ukuguqulwa nganoma yisiphi isikhathi.
Kepha uma okukuthandayo ukwazi Uma i-Ethereum ihlukile kuneBitcon, impendulo ithi cha. Enye indlela eya eBitcoin esinikezwa ngu-Ethereum ibizwa nge-Ether, ipulatifomu ngaphandle kwephrojekthi ye-Ethereum esizokutshela konke okungezansi ukuze wazi ukuthi isebenza kanjani futhi indlela yokuthenga i-Ethereum.
Uma ufuna ukuthenga i-Ethereum manje, thola i- $ 10 MAHHALA ekuthengeni kwakho ngokuchofoza lapha
1 Kuyini i-Ethereum?
2 Yini i-Ether?
3 Ngubani owadala u-Ethereum?
4 Okuhlukile kweBitcoin
5 Ungayithenga kanjani i-Ethereum?
6 Yini i-blockchain?
7 Izinkontileka ezihlakaniphile
8 Ingabe kukhona ibhamuza le-cryptocurrency?
Njengoba ngishilo ngenhla, i-Ethereum yiphrojekthi ehlanganisa imali yedijithali, i-Ether, njengeBitcoin, kodwa isebenzisa amathuba esinikezwa yi-blockchain, irekhodi elingenakuguqulwa nokuthi selokhu kwazalwa u-Ethereum kuye kwaqondiswa ekwakhiweni kwezinkontileka ezihlakaniphile. Izinkontileka ezihlakaniphile, njengomthetho ojwayelekile, zifaka ukusebenza kwezezimali, zisebenza ngendlela esobala kuzona zombili izinhlangothi futhi ukusebenza kwazo kufana kakhulu namakhodi wokuhlela Uma benza lokho. Lokho wukuthi, uma lokhu kwenzeka, kufanele ukwenze lokhu ngoyebo noma yebo.
Thola u- $ 10 WAMAHHALA wokuthenga i-ETH ngokuchofoza lapha
Yonke le mininingwane ibonakala ku-blockchain, irekhodi elingenakuguqulwa lapho yonke imisebenzi ibonakala, noma ngabe kuyathengiswa noma kuthengwa izinhlamvu zemali, izinkontileka ezihlakaniphile ... Imininingwane egcinwe ku-blockchain yesikhulumi iyatholakala kuwo wonke umuntu futhi iyatholakala kuwo wonke amakhompyutha akha inethiwekhi ye-Ethereum. Ukusebenza kwe-Bitcoins blockchain kucishe kufane, kepha kubhala kuphela imininingwane yokuthengiselana, ngoba amathuba ahlinzekwa yilobu buchwepheshe awakhulisiwe.
Ipulatifomu ye-Ethereum akuyona imali uqobo. I- I-Ether iyimali yesikhulumi se-Ethereum, futhi esingakhokhela ngalo abantu ngezinto noma ngamasevisi. U-Ether ungenye yama-cryptocurrensets atholakalayo emakethe asungulwe ukuze ancintisane namaBitcoins, kepha ngokungafani nalokhu okugcina, i-Ether ifakiwe ngaphakathi kwesikhulumi esisebenzisa ngokugcwele ama-blockchains, awaziwa kangcono nge-blockchain.
I-Ether, njengeBitcoin alilawulwa yinoma yimuphi umgwamanda wezezimali, ngakho-ke inani layo noma intengo yayo ayixhunyanisiwe namasheya, izindlu noma izindlu. Inani le-Ether linqunywa emakethe evulekile ngokuya ngemisebenzi yokuthenga nokuthengisa ekhona ngaleso sikhathi, ngakho-ke intengo yayo izoshintsha ngesikhathi sangempela.
Ufuna 10 $ mahhala uma uthenga i-EtH yakho? Kulungile chofoza lapha
Ngenkathi inani lamaBitcoins lilinganiselwe kwizigidi ezingama-21, I-Ether ayikhawulwanga, yingakho inani layo okwamanje liphansi kakhulu izikhathi eziyi-10 kuneBitcoins. Ngesikhathi ukuthengiswa kwangaphambi kwesikhathi okwenziwe ngaphambi kokwethulwa kwe-Ethereum, kwadalelwa u-Ether wezigidi ezingama-72 kubo bonke abasebenzisi abafake isandla ngeplatifomu yeKickstarter kuphrojekthi kanye nesisekelo se-Ethereum, njengoba, njengoba sizobona, sisinikeza okunye okubaluleke kakhulu imisebenzi futhi ezibalulekile. Ngaphansi kwemigomo eyenziwe ngesikhathi sokuthengisa kwangaphambilini ngo-2014, ukukhishwa kwe-Ether kunqunyelwe kwizigidi eziyi-18 ngonyaka.
Ngabe ufuna ukutshala imali ku-Ethereum?
Chofoza LAPHA ukuthenga ama-Ethers
Ngubani owadala u-Ethereum?
Ngokungafani neBitcoins, umdali we-Ethereum unegama nesibongo futhi akafihli. UVitalik Buterin uqale ukuthuthukiswa kwe-Ethereum ngasekupheleni kuka-2014. Ukuze kuxhaswe ukuthuthukiswa kwephrojekthi, uVitalik wafuna uxhaso lomphakathi, wakhulisa ngaphezulu nje kwezigidi eziyi-18 zamadola. Ngaphambi kokugxila kuphrojekthi ye-Ethereum, uVitalik wayebhala kumabhulogi ahlukene mayelana neBitcoins, kungaleso sikhathi lapho aqala khona ukuthuthukisa izinketho ubuchwepheshe obusebenzisa iBitcoin obungamnika zona futhi kuze kube yilapho leso sikhathi sichithwa.
Njengamanje emakethe singathola inani elikhulu lokunye okungasetshenziswa kune-Bitcoin enamandla onke, kepha njengoba isikhathi sihamba, le nombolo incishisiwe kakhulu Ether, Litecoin ne-Ripple njengezinye izindlela ezisetshenziswa kakhulu ngabasebenzisi. Iningi lempumelelo u-Ether anayo, sibonga yonke iphrojekthi ye-Ethereum engemuva, ngoba ukube bekungenye indlela, ibingeke ikwazi ukuthola ikota yemisebenzi eyenziwa emhlabeni wonke ngama-cryptocurrensets, lapho iBitcoin ikhona inkosi ecishe ibe ngama-50% wezohwebo.
Ungayithenga kanjani i-Ethereum?
Ngokulandelayo sizochaza indlela yokuthenga i-Ethereum Noma kunalokho, ungayithenga kanjani i-Ethers okuyigama le-cryptocurrency.
Ukuba ngumncintiswano oqondile ovela kwiBitcoin, ukukwazi ukuzibandakanya ngokugcwele ekwakhiweni kwama-Ethers sidinga ikhompyutha enamandla, uxhumano lwe-inthanethi kanye nesoftware edingekayo ukwazi ukuba yingxenye yenethiwekhi eyayihlanganisayo, bese ngaleyo ndlela uqale ukuthola lolu hlobo lwemali edijithali. Ngokubheka ukuthi iBitcoin yaqala ukusebenza ngo-2009, isicelo kanye nezimfoloko ezihlukene esingazithola emakethe zisebenza ngokugcwele, into esingakwazi ukuyisho nge-Ethereum okwamanje.
Singakhetha futhi ithrekhi esheshayo futhi thenga i-Ethereum ngqo le mali ngezinsizakalo ezifana neCoinbase, insizakalo esivumela nokuthi sigcine ama-cryptocurrensets ethu ngokuphepha.
Ukuze sichaze izinzuzo u-Ethereum asinikeza zona, kufanele sikhulume nge-blockchain, umthetho olandelwayo osetshenziselwa ukuphatha wonke amarekhodi nokusebenza okwenziwa no-Ether, umthetho olandelwayo ofanayo osetshenziswa yiBitcoins kepha abanikeze usizo olubaluleke kakhulu olunikeza ukuphepha.
IBlockchain yi-registry lapho yonke imininingwane ehlobene nama-cryptocurrensets igcinwa khona. I-cryptocurrency ngayinye isebenzisa irejista ehlukile. Leli rekhodi ayikwazi ukuhlelwa noma ukuguqulwa nganoma yisiphi isikhathi futhi kubonakala kubo bonke, ukuze noma ngubani akwazi ukukufinyelela. Ukuvikelwa ekuguqulweni okusinikezwa yi-blockchain ubuhle bayo obukhulu ngoba bungasetshenziselwa ukwakha Izivumelwano Ezihlakaniphile.
Ngenxa ye-Ethereum ungenza izinkontileka lokho uma izimo ezibhaliwe zigcwaliseka, zizogcwaliseka uma noma uma ngokuzenzekelayo ngaphandle komuntu wesithathu okufanele anikeze ukuqhubeka. Isimo sokubekwa kwemibandela okumele kuhlangatshezwane naso singakhethwa emithonjeni esungulwe izinhlangothi zombili. Uhlelo lwebhange lungelinye lolo olunentshisekelo enkulu yokwamukela lolu hlobo lwenkontileka ukwenza izinkontileka zamadiphozithi nezinye ezinamakhasimende, ngoba kungagwema amaphutha abantu okungenzeka ngaphezu kokuvumela ukusebenza okuzimele.
Cabanga ukuthi unephothifoliyo yezokuphepha lapho ubeke khona isimo sokuthi uma intengo yesibambiso esithile ifinyelela ku-X ithengisa ngokuzenzekelayo. Ngenkontileka ehlakaniphile yakwa-Ethereum akekho umuntu obezongenelela, Akekho okufanele azi intengo ngaso sonke isikhathi ukuqhubeka nokuthengisa amasheya lapho efinyelela inani elithile.
Yize yonke into ibukeka futhi yinhle kakhulu, kufanele kukhunjulwe ukuthi lolu hlobo lwenkontileka alunakuguqulwa, ngakho-ke uma selufakiwe ebhukwini kuphela uma ungakhansela uma isimo sisethiwe esivumela lokho. Futhi imigomo yesivumelwano ayinakuguqulwa, ngoba njengoba ngiphawule nge-blockchain yirekhodi elingakwazi ukuhlelwa noma ukuguqulwa nganoma yisiphi isikhathi.
Ingabe kukhona ibhamuza le-cryptocurrency?
Njenganoma yiluphi olunye uhlobo lwefa, ama-cryptocurrensis athinteka kumabhamuza afaka intengo yawo ngaphezu kwenani langempela lawo. Endabeni yama-cryptocurrensets, ukuthola i-bubble engenzeka kungumsebenzi onzima kakhulu kunezinye izinhlobo zezimpahla kusukela lapho cishe akunakwenzeka ukuthola inani langempela lento ethile njenge-ethereal njenge-cryptocurrency. Inani le-Ether ligcinwa ngumthetho wokuphakelwa kanye nokufunwa, lapho abantu abaningi bethenga ama-Ethers, kulapho intengo yayo ikhuphuka futhi okuphambene nalokho, okungadala ukuthi intengo yayo yamanje ithinteke kakhulu ngabaqageli abathenga futhi bathengise ama-cryptocurrensets becabanga kuphela cabanga ngentengo yayo. Inzuzo u-Ether anayo ngaphezu kweBitcoin ukuthi inani layo aligcini kumayunithi ayizigidi ezingama-21 kepha ama-ether ayizigidi eziyi-18 akhishwa minyaka yonke okuzosiza ekunciphiseni ukwehla kwamandla emali kunani.
Noma kunjalo, kunzima ukwazi ukuthi ngabe sibhekene ne-bubble noma cha, ngoba ezinye izazi zikubheka lokho eminyakeni emi-5 kuya kwengu-10 intengo ye-Ether ingahle ibe ngaphezu kwezikhathi eziyi-100 zamanje okuzokhombisa ukuthi lusenohambo oluphakeme oluphezulu.
Uma u-Ethereum ekuqinisekisile futhi ufuna ukuba yingxenye yale cryptocurrency, lapha ungathenga ama-Ethers. Ngabe awukakhuthazi namanje thenga i-Ethereum?
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » Ubuchwepheshe » I-Ethereum Iyini nokuthi ungathenga kanjani ama-Ethers?
Ethereum! Yeka imali enhle, njengokuthanda kwami ​​okuphephile noma ngokuqagela okuningi kohlelo lwe-cryptocurrency ecosystem
Sengivele ngithengile ama-ETH wami 🙂
UFrancisco Villarreal Guijo kusho
Nginentshisekelo yokutshala imali e-Ethereum. Malini inani eliphansi okufanele ulitshale futhi ngingakuthola kanjani ukutshalwa kwezimali?
Ukubingelela F. Villarreal
Phendula uFrancisco Villarreal Guijo
Nginentshisekelo yokutshala imali e-Ethereum. Yiliphi inani eliphansi lokuthenga i-ethereum nokuthi ungayibuyisa kanjani imali oyitshalile.
IGoogle Assistant manje ikhomba izingoma njengeShazam
I-NichePhone-S ifoni elingana nekhadi elilingana nekhadi